Olee otú Naghachi iMessage si iPhone
Olee otú Naghachi iMessages si iPhone (iPhone 6s Plus gụnyere)
Texting iMessages bụ ezigbo mfe site na iOS 9 iPhone, iPad, iPod aka, na Mac. Otú ọ dị, na mberede ihichapụ iMessage nadabakwara oge niile. Bụ ọ na-otú mara mma na-agbake ehichapụ iMessages? Azịza ya bụ ee. E nwere ụzọ atọ ka ị weghachite ehichapụ iMessages si iPhone, iPad na iPod aka.
iOS 9 / iPhone 6s (Plus) iMessage Iweghachite Software
Na-enye gị ụzọ atọ naghachi ehichapụ iMessages si iPhone 6 (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Weghachite iMessages kpọmkwem site iPhone, iTunes nkwado ndabere na mpaghara iCloud ndabere.
Naghachi ehichapụ iMessages gụnyere ederede ọdịnaya, Mgbakwụnye na Emoji.
Na-akwado iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus) na ọhụrụ iOS 9 n'ụzọ zuru ezu!
Preview na selectively naghachi iMessages na mbụ mma.
1: Naghachi ehichapụ iMessages si iPhone
2: Naghachi furu efu iMessages si iTunes
3: Naghachi gara aga iMessages si iCloud
Nkebi nke 1: Kpọmkwem Naghachi iPhone iMessages, Mfe na ngwa ngwa
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị iPhone (iOS 9 akwado) na kọmputa na-ike iṅomi ya
Mgbe nbudata na na na wụnye usoro ihe omume, na-agba ya na kọmputa gị. Mgbe ahụ usoro si window ga-dị ka ndị a. Ị pụrụ nanị pịa "Malite" ka iṅomi ya.
Nzọụkwụ 2 Preview na selectively naghachi ehichapụ iPhone iMessages
Dị nnọọ ka ikpeazụ nzọụkwụ na mgbake mode n'elu. ọ bụ oge ka ​​ịhụchalụ na ego gị aga na data ugbu a. Dị nnọọ ego otu otu na pịa Naghachi na-azọpụta ha na kọmputa gị.
IHE: Mụta ihe banyere naghachi ehichapụ ozi na ihe iPhone (iOS 9 akwado), ị nwere ike ịga n'ebe: Naghachi ehichapụ iPhone ozi
Part 2: Naghachi iMessage ọdịnaya site iTunes ndabere
Dị ka anyị nile mara na iTunes nwere ike na-akpaghị aka ndabere data na ihe iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka, mgbe ị na-mmekọrịta na ya. Mgbe adịkwa data, ị nwere ike ozugbo weghachi nkwado ndabere na mpaghara gị iPhone. N'izo aka naghachi iMessages si iTunes ndabere, e nwere ụzọ abụọ n'ihi na ị na ịhọrọ site na: selectively naghachi iMessages ma ọ bụ naghachi dum ndabere.
Weghachi site iTunes
Devices akwado N'ihi na ihe niile iPhones, gụnyere iPhone 6s (Plus) N'ihi na ihe niile iPhones
Preview iTunes ndabere ọdịnaya tupu mgbake;
selectively naghachi ọ bụla ị chọrọ site na nkwado ndabere na mpaghara;
No data overwritten na iPhone;
Cons Ugwo software na a ikpe version.
Ọ dịghị preview;
Ọ dịghị nhọrọ weghachi;
na-edochi niile data na iPhone.
Ka ego otú naghachi iPhone iMessages site adịrị ndị iTunes ndabere faịlụ na nzọụkwụ. Mbụ, ibudata ikpe mbipute n'okpuru maka free.
Nzọụkwụ 1 wepụ iTunes ndabere faịlụ
All ndabere faịlụ nke ngwaọrụ gị ụdị ga-edepụtara-akpaghị aka mgbe ị na-abanye a mgbake mode (dị ka window gosiri n'elu). Họrọ onye na maka gị iPhone (na-emekarị onye na ọhụrụ ndabere ụbọchị ma ọ bụrụ na e nwere ihe karịrị otu), na pịa Malite iṅomi na-amalite adịrị ya n'ihi na gị iMessage.
Nzọụkwụ 2 Preview na-agbake ehichapụ iMessage si iPhone
Mgbe Adịrị completes, dum ọdịnaya nke ndabere faịlụ na-egosipụta na nkọwa. Họrọ Ozi na n'aka ekpe na window, na i nwere ike ihuchalu zuru ezu ọdịnaya nke gị ozi na iMessage. Akara ndị ị chọrọ iji naghachi na pịa "Naghachi" button n'elu nke mpio ahụ, i nwere ike ịzọpụta ha na kọmputa gị na otu onye dị mfe click.
Nkebi nke 3: Weghachi iMessage si iCloud ndabere
Iji weghachite iMessage si iCould ndabere, ị mkpa iji weghachi dum ndabere site mwube gị iPhone dị ka a ngwaọrụ ọhụrụ mbụ. Ọ bụrụ na ị na-achọghị ime ya n'ụzọ dị otú a, ị nwekwara ike iji Wondershare Dr.Fone maka iOS. Ọ na-ahapụ gị ịnweta ka ịhụchalụ na selectively naghachi iMessages na gị iPhone.
Nzọụkwụ 1 Gbaa usoro ihe omume na abanye na gị iCloud
Mgbe na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone maka iOS na kọmputa gị, gaa na mgbake mode nke naputa site na iCloud ndabere File n'elu nke window. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-ewetara gị a window maka egbu osisi na gị Apple ID. Naanị mee ya dị ka ọ na-agwa gị. Wondershare Ewe nzuzo gị kpọrọ ihe ma ghara ịnọgide na-ọ bụla ndekọ nke ya.
Nzọụkwụ 2 Download na ike iṅomi ndị iCloud ndabere na-data na ya
Ozugbo ị ite ke, usoro ihe omume ga-akpaghị aka ịhụ niile gị ndabere faịlụ na iCloud akaụntụ. Họrọ onye ị chọrọ na pịa ibudata ya. Mgbe ahụ ị pụrụ iṅomi ya na onye ọzọ click.
Nzọụkwụ 3 Preview na-agbake iMessages n'ihi na gị iPhone
Doppler ga-ewe gị oge ụfọdụ. Mgbe ọ na-akwụsị, ị pụrụ ịgụ niile hụrụ data gị iCloud ndabere. Họrọ ihe nke ozi ma na Message Mgbakwụnye. Ị nwere ike họrọ ihe ọ bụla onye ị chọrọ na-azọpụta ya na kọmputa gị site na ịpị Naghachi bọtịnụ.
niile iPads gụnyere iPad Air, iPad Obere na Retina ngosi, iPad Obere, iPad na Retina ngosi, The ọhụrụ iPad, iPad 2, iPad 1
> Resource> iPhone> Olee naghachi iMessages si iPhone